लक्ष्मणलाल कर्ण- नेता, जसपा
काठमाडौं, २९ चैत । गएको शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ३ दलको संयुक्त बैठक बोलाए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको झण्डै १ हप्तापछि देउवाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को संयुक्त बैठक बोलाएका हुन् ।
शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव अघि सारे । त्यसमा माओवादी केन्द्रले समर्थन जनाए भने जसपाका नेताहरुले निर्णय दिन सकेनन् । यसबारे थप छलफल गरेर संस्थागत निर्णय गर्नका लागि समय माग गरियो । यसै विषयमा जनता समाजवादी पाटी (जसपा) का नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग साझापोष्टले कुराकानी गरेको छ ।
संसद पुनःस्थापना भएको झण्डै २ महिना हुन लागिसक्यो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यक्तिकै नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ । कांग्रेस, जसपा, माओवादीले पनि विकल्प दिन सकिरहेका छैनन् । जसपाले पनि आफ्नो भूमिका यहि हो भन्न सकिरहेको छैन । निकासका लागि समसया कहाँनिर हो ?
हामीले पहिले संविधान बन्ने बेलामा ६ महिनाको आन्दोलन गर्‍यौं । संविधान जारी भएपछि हाम्रो आन्दोलन अझ मजबुत बन्दै थियो । त्यतिबेलादेखि नै हामी संविधानप्रति सन्तुष्ट बन्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो । तर, त्यो आन्दोलनमा एकसयभन्दा धेरै मानिसहरु मारिए । हजारौँ मानिसहरुलाई घाइते तुल्याईयो । दुई दर्जनभन्दा धेरै व्यक्तिहरु अपांग भएर घरैमा बसिरहेका छन् ।
हामीहरुका नेता र कार्यकर्ताहरुमाथि २९१ वटा मुद्दा लागेको छ । हाम्रा नेता र कार्यकर्ताहरुले जुन दुःख पाइरहेका छन्, त्यसको निवारण गर्ने दायित्व र कर्तव्य हाम्रो हो । त्यसैले हामीले हाम्रा नेता र कार्यकर्ताहरुको रिहाई र मुद्दा फिर्ताको कुरा गरिरहेका हौँ । संविधान संसोधनको कुरा उठाइरहेका हौँ ।
यी विषयहरु जुन सरकारले पुरा गर्छ त्यसैलाई साथ, समर्थन दिन्छौँ । अरुलाई हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ । यो विषयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग हामीले पटक–पटक कुराकानी गरेका छौँ । केही कामहरु सकारात्मक रुपमा अघि बढिसकेको अवस्था हो । त्यसैले हाम्रो माग जसले सम्बोधन गरेर पुरा गर्छ त्यसैलाई साथ दिने हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई प्रतिगामी भनेर तपाईहरुले नै भन्नुभयो । तर, तपाईको यो भनाईले त ओलीले माग पुरा गर्यो भने त ओलीलाई नै साथ दिने भन्ने संकेत गर्‍यो नि ?
हामीलाई सबैभन्दा पहिले काम चाहियो । जसले काम गर्छ उसलाई हाम्रो साथ र समर्थन रहन्छ । प्रतिगमनको कुरा गर्ने हो भने त, हाम्रो लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि त्यतिकै प्रतिगमनकारी शक्ति हो ।
देउवाजीले प्रजातन्त्रलाई नै लगेर राजालाई बुझाएको होइन ? माओवादीले ३३ दलको संयुक्त आन्दोलन गर्दागर्दै हामीलाई छाडेर धोका दिएर गएको होइन ? ओलीलाई मात्रै प्रतिगमनकारी भनेर भन्न मिल्दैन ।
मधेसी, जनजाती, थारुलगायत समुदायका लागि यिनिहरु कोही पनि अग्रगामी छैनन् । सबै प्रतिगामी हुन् । अनि हामीले कसको विश्वास गर्ने ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईहरुको साथ खोजिरहनुभएको छ । रेशम चौधरीको रिहाईदेखि संविधान संसोधनसम्मका मागहरु पुरा हुन सक्ने वातावरण बन्यो भने केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिन तपाईहरु तयार हो ?
अब हामी कसैको बोलीमा विश्वास र प्रतिवद्धता गर्दैनौँ । प्रचण्ड, देउवाहरुसँग गरिएको कागजमाथि हामीलाई विश्वास छैन । हामीलाई जसरी हुन्छ काम चाहियो । हाम्रो माग ओलीजीले पुरा गर्नुहुन्छ भने समर्थन गर्न तयार छौँ । उहाँको प्रतिवद्धतामा र उहाँ कति सकारात्मक हुन्छ भन्ने कुरामा अब हामी भरोसा गर्दैनौँ ।
तपाईहरुको माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट कत्तिको सम्भावना देख्नुभएको छ ?
कुरा भइरहेको छ । सम्भावना त उहाँकै हातमा छ कहिले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त ।
तर कतिपय तपाईहरुले उठाउनुभएका विषय त राजनीतिक मात्रै नभएर न्यायालयले हेर्ने विषय छन् नी ? राजनीतिक दल या सरकारले भन्दैमा त्यो काम हुन सक्छ ?
रेशम चौधरीको विषयमा तपाईले भन्नुभएको जस्तै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हो । सर्वोच्च अदालतबाट छिनोफानो नभईकन त्यो काम चल्दैन । त्यो बाहेक पनि जिल्ला/जिल्लामा मुद्दाहरु छन् । त्यो सबै झुटा मुद्दाहरु हुन् ।
सरकारले हामीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ । सर्वोच्चको एक तहको फैसला आइसकेपछि मात्रै मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने हो । त्योभन्दा पहिले नै सरकारले आफूहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । हामीहरुले कानुन बमोजिम फिर्ता गर्न भनिरहेका छौँ ।
तपाईले भन्नुभयो, जसले माग पुरा गर्छ त्यसैलाई साथ दिने हो भनेर । केपी शर्मा ओलीले माग पुरा गरे भने ओलीलाई नै साथ दिन पनि सकिन्छ भन्नुभयो । तर, तपाईहरुकै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरु त केपी शर्मा ओलीलाई कुनै पनि हालतमा काँध थाप्न नसकिने बताइरहनुभएको छ नी ?
आफ्नो विचार राख्ने सबैको अधिकार हो । विचार राख्नु र पार्टीको धार तयार गर्नु अलग प्रश्न हो । मैले कतिपय कुराहरु भनेको छु त्यो मेरो विचार हो । अरु नेताहरुले भनेका कुरा उहाँहरुको विचार होला । बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवहरुलाई पनि त आ-आफ्नो विचार राख्ने अधिकार छ ।
सबैको आ-आफ्नो दुरविन छ । कसैले एउटालाई मात्रै प्रतिगमन देखिरहेको छ भने कसैले सबैलाई प्रतिगमन भनिरहेको छ । यो स्वभाविक हो । कतिसम्मको प्रतिगमनको मूल्यांकन गर्ने हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । आज केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन गरे भने हिजोको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजीहरुले प्रतिगमन गरेका थिए ।
मधेसीलाई मारेर बनाइएको संविधान बढी प्रतिगमन कि संसद विघटनमात्रै गरिदिने कदमलाई बढी प्रतिगमन भन्ने भन्ने विषय अहिले मूल्यांकनको विषय हो । यसबारे हामी बैठक बस्छौँ र एउटा निचोड निकाल्छौँ ।
नयाँ सत्ता गठबन्धनबारे छलफल गर्नका लागि शुक्रवार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ३ दलको बैठक डाक्नुभएको थियो । छलफलपछि तपाईहरुले यसबारे थप कसरत गर्नुपर्ने भन्दै समय माग्नुभयो । यसबारे धारणा बनाउन तपाईहरुलाई तपाई अझै अपुग हो र ?
यसबारे हामीले अहिले पार्टीको कुनै संस्थागत छलफल नै गरेका छैनौँ । अहिले जति पनि छलफल भएका छन् नेताहरुको छलफल मात्रै हो । हाम्रा जसपाकै साथीहरुले अहिले आफ्नो व्यक्तिगत विचार दिइरहनुभएको छ ।
कसैलाई समर्थन गर्ने अथवा साथ दिने विषयहरु संस्थागत निर्णयबाट मात्रै हुन्छ । त्यसका लागि अहिलेसम्म हामीले संस्थागत निर्णयका लागि बैठक बसेका छैनौँ । त्यसका लागि बैठक बसेर मात्रे निर्णयमा पुग्छौँ ।
तपाईहरुलाई यस विषयमा हतारो चाँही किन नभएको ?
हो हामीलाई कुनै हतारो छैन । ४ वटा पार्टीमध्ये हामी सबैभन्दा सानो पार्टी हौँ । ठूला पार्टीहरु टुटफुट गरिरहेका छन् त्यो कुर्सीका लागि । यत्रो विवाद भयो त्यो पनि कुर्सीकै लागि ।
माओवादीले पार्टी फोडे कुर्सीकै लागि । देउवालाई पार्टीको सहमति चाहियो त्यो पनि कुर्सीकै लागि । हामी अहिले कुर्सीको लछारपछारमा नरहेकोले आरामले बसिरहेका छौँ ।
तर सत्ता समीकरणको साँचो त तपाईहरुसँगै छ नी ? तपाईहरुले समातेर राख्नुभएको सत्ताको चाबी कहिले खोल्नुहुन्छ ?
हामीसँग साँचो हुने त प्रश्न नै भएन नि । तपाईहरुले मात्रै हामीलाई साँचोवाला बनाइदिनुभएको छ ।
तर, तपाईहरुले जतातिर समर्थन दिनुहुन्छ, त्यतैतिरको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था छ नी ?
सबैले दबाउने कमजोरलाई हो । हामीसँग सत्ताको चाबी भइदिएको भए के के ने पो गरिसक्थ्यौँ । माओवादी र कांग्रेस दुबैले अहिले जसपाको कारण समस्या भइरहेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ ।
ए बाबा उनीहरुले चाँही कुनै निर्णय गरेको छ र ? खै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ? खै कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव लगेको ? आफूले नगरेको कामको अपजस हाम्रो टाउकोमा राख्ने काम भइरहेको छ ।
तर, ३ दलबीच सहमति नबन्दै समर्थन फिर्ता लिइयो भने फेरि पनि विघटन हुन सक्छ र चुनावमै जानुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर माओवादीका नेताहरुले भन्दै हुनुहुन्छ । समर्थन फिर्ता लिनुपूर्व तपाईहरुले एउटा ठोस निचोड निकाल्नु पर्दैन ?
त्यसो भए, त्यस्तो अपठ्यारो संविधान किन बनाएको त ? यस्तो संविधान बनाउने एमाले, माओवादी र कांग्रेस हो होइन र ? हामीले त पहिलेदेखि नै संविधान संसोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ ।
आफैंले बनाएको संविधानले आफैंलाई असर गर्यो भनेर भन्दै हिँडेर केही फाईदा छ र उहाँहरुलाई ? प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि बहुमतकैसरकारमा हनुहुन्छ । विश्वस नै गुमाउनुभएको छैन भने उहाँले विश्वासको मत किन लिने ? भन्ने पनि त होला नी । अहिले त खेल सुरु भएको नै छैन ।
खेल त कांग्रेस र माओवादीले रोकिराखेको छ । आज माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने भोलिदेखि नै खेल सुरु भइहाल्छ । कांग्रेस र माओवादीमध्ये एउटा शक्तिले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने हो भने खेल त त्यहिँबाट सुरु भैहाल्छ ।
अनि फेरि हामीममाथि दोस थुपार्ने काम निक भैरहेको छ ? हामीहरु नै बुझिरहेका छैनौँ । अहिलेको अन्यौल परिस्थिति आउनुका कारण नै कांग्रेस र माओवादी हो । उहाँहरुको दोहोरो चरित्र देखिएकोले हामीहरुले विश्वास गरिहाल्ने वातावरण नबनेको हो ।